The Gentlemen (2019) | MM Movie Store
သူ့နာမညျက မဈကီပီရာဆနျ…..ဥာဏျကောငျးပွီးအောကျစဖိုဒျ့ကြောငျးသားတဈယောကျဖွဈပမေယျ့ သူက ဆငျးရဲတယျ…သူဟာ ထကျမွကျတဲ့သူတဈယောကျဆိုပမေယျ့ ကြောငျးမပွီးဘူး…ဘာလို့ဆို မူးယဈဂိုဏျးက လူတဈခြို့နဲ့အဆကျအသှယျရပွီးအခြိနျတိုအတှငျး ငှတှေမြေိုးမြိုးမကျြမကျြဝငျတဲ့ ဒီလောကကို သူသဘောကသြှားတယျ…
လူတဈယောကျရဲ့ လညျပငျးကိုလှီးပွီး သှေးစငျတာတောငျ မကျြတောငျခတျဖို့ သတိမရတတျတဲ့ဒီပတျဝနျးကငျြမှာ ဟိုနရောဆေးလေးပို့ ဒီနရောဆေးလေးပို့ ငှလေေးယူလိုကျအမွတျငှလေေးအိပျထဲထညျ့လိုကျရုံနဲ့မပွီးဘူးဆိုတာသိတဲ့နောကျမှာတော့မဈကီတဈယောကျဟာ သူ့ကိုယျသူ ဒီလောကရဲ့ အမြားသူငါမျောမကွညျ့ရဲတဲ့ဘုရငျတဈပါးအဖွဈပုံပွောငျးပါတော့တယျ….
ဒီဇာတျကားက ဂနျးစတားတှအေကွောငျးရိုကျထားတာပါ…ဒုစရိုကျသမားတှရေဲ့ကတုံးပျေါထိပျကှကျတှေ…လညျသူစားစတမျးတှေ….လကျမရှံတှကွေား မကျြခုံးမှေးပျေါစင်ျကွနျလြှောကျတဲ့သူတှနေဲ့ ဒီကားကတျောတျောမိုကျပါတယျ…The Irishman (2019) တို့လို့ ခပျအေးအေးနဲ့ ဇာတျလမျးကို ဆှဲချေါတတျတဲ့အမြိုးအစားမဟုတျပါဘူး..
သူက ဖွဈရပျမှနျကိုအခွခေံထားတာကွောငျ့ လညျးပါမှာပေါ့လေ…The Gentlemen (2019) ကတော့ ခပျသှကျသှကျနဲ့ကိုဇာတျလမျးစထားပါတယျ…အဓိက သရုပျဆောငျဖွဈတဲ့ Matthew McConaughey ကိုတော့အားလုံးသိကွမှာပါ…
အခွားဝါရငျ့ဟာသသရုပျဆောငျတှေ အကျရှငျသရုပျဆောငျတှေ ပါဝငျထားပါတယျ။ လူငယျအနနေဲ့လညျး crazy rich Asian တို့ last Christmas တို့ရဲ့ မငျးသား ဟငျနရီ ဂိုးဒငျးတို့လညျး ပါဝငျထားပါသေးတယျ။
သူ့နာမည်က မစ်ကီပီရာဆန်…..ဥာဏ်ကောင်းပြီးအောက်စဖိုဒ့်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် သူက ဆင်းရဲတယ်…သူဟာ ထက်မြက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုပေမယ့် ကျောင်းမပြီးဘူး…ဘာလို့ဆို မူးယစ်ဂိုဏ်းက လူတစ်ချို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီးအချိန်တိုအတွင်း ငွေတွေမျိုးမျိုးမျက်မျက်ဝင်တဲ့ ဒီလောကကို သူသဘောကျသွားတယ်…
လူတစ်ယောက်ရဲ့ လည်ပင်းကိုလှီးပြီး သွေးစင်တာတောင် မျက်တောင်ခတ်ဖို့ သတိမရတတ်တဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဟိုနေရာဆေးလေးပို့ ဒီနေရာဆေးလေးပို့ ငွေလေးယူလိုက်အမြတ်ငွေလေးအိပ်ထဲထည့်လိုက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးဆိုတာသိတဲ့နောက်မှာတော့မစ်ကီတစ်ယောက်ဟာ သူ့ကိုယ်သူ ဒီလောကရဲ့ အများသူငါမော်မကြည့်ရဲတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးအဖြစ်ပုံပြောင်းပါတော့တယ်….
ဒီဇာတ်ကားက ဂန်းစတားတွေအကြောင်းရိုက်ထားတာပါ…ဒုစရိုက်သမားတွေရဲ့ကတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်တွေ…လည်သူစားစတမ်းတွေ….လက်မရွှံတွေကြား မျက်ခုံးမွေးပေါ်စင်္ကြန်လျှောက်တဲ့သူတွေနဲ့ ဒီကားကတော်တော်မိုက်ပါတယ်…The Irishman (2019) တို့လို့ ခပ်အေးအေးနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဆွဲခေါ်တတ်တဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်ပါဘူး..
သူက ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် လည်းပါမှာပေါ့လေ…The Gentlemen (2019) ကတော့ ခပ်သွက်သွက်နဲ့ကိုဇာတ်လမ်းစထားပါတယ်…အဓိက သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ Matthew McConaughey ကိုတော့အားလုံးသိကြမှာပါ…
အခြားဝါရင့်ဟာသသရုပ်ဆောင်တွေ အက်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေ ပါဝင်ထားပါတယ်။ လူငယ်အနေနဲ့လည်း crazy rich Asian တို့ last Christmas တို့ရဲ့ မင်းသား ဟင်နရီ ဂိုးဒင်းတို့လည်း ပါဝင်ထားပါသေးတယ်။
The Good Doctor (Season 2) ၊ အပိုငျး (၁၆)